Njem - Akụkọ Njem | Akụkọ Njem (Peeji nke 3)
Ihe ị ga-ahụ na Mallorca
Anyị abanyelarịrị na Nọvemba ma oge oyi na-abịa. Ọ bụrụ na ị masịghị ya ma ị bụ otu n'ime ndị ...
Royal National nkwari akụ, London
Otu n'ime obodo kachasị na obodo niile na Europe na ụwa niile bụ London, yabụ ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ ...
Ihe ị ga-ahụ na French Polynesia
Chọpụta ihe ị ga - ahụ na French Polynesia, otu agwaetiti dị na Bora Bora ma ọ bụ Tahiti.
5 mara mma mara mma
Planetwa anyị nwere ọdịdị mara mma mara mma nke, na-atụ anya, a ga-echekwa oge. Ọ dabere na anyị ka anyị wee ...
Hotels na New York, ezigbo nhọrọ dị ọnụ ala
New York bụ obodo nwere nnukwu ụlọ nkwari akụ, nke ụdị, ụdị na ọnụahịa niile. Na ego na ...
Njem ịga Equatorial Guinea
Ọ bụ naanị mba abụọ n ’Africa ka nwere Spanish dịka asụsụ mba ha na otu n’ime ha bụ Equatorial Guinea….
Họtelu ndi di na Krakow
Anyị na-agwa gị nke bụ ụlọ oriri na ọ bestụ bestụ kacha mma n'obodo Krakow yana ụfọdụ ebe mmasị iji hụ n'obodo ahụ.
Ga njem ma nọrọ n'ụdị: akụkụ abụọ nke otu mkpụrụ ego
Ga njem bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji chọpụta, ịmụ na ịmata ihe na-eme na ebe ndị ọzọ ...
Burj Khalifa, na-atụ aka na mbara igwe
Ana m ekwu mgbe niile na ụmụ mmadụ na-enwe mmasị ịbịaru eluigwe nso, na iwu ihe owuwu ...
Nlegharị anya na Düsseldorf
Otu n'ime chicest obodo na Germany bụ Düsseldorf. N'ebe a, a na-ejikọta saịtị ndị mere eme na ogige ntụrụndụ, na chọọchị dị iche iche ...
Vlọ njem ụgbọ mmiri Viking, na Oslo
The Vikings bụ protagonists nke akụkọ ihe mere eme nke Europe, na ruo oge ụfọdụ ugbu a ha na-eji ejiji ...
Ihe ị ga-ahụ na Tokyo
Tokyo bụ otu n’ime isi obodo ụwa. Ọ bụ obodo jijiji na ndị mmadụ, ihe omume, ohere ...
Gbaso ofzọ nke Bear
Ọ na-amasị gị ịpụ maka ịgagharị, ịga ije ogologo na ogologo, ịgba ịnyịnya ígwè? Ọfọn, nke ahụ bụ ihe ụzọ a na-atụ aro ...
Corralejo, oké osimiri, dunes na osimiri
The nwere mmasị n’agwaetiti Canary? Ha dị mma, ọ bụghị naanị n'etiti ndị Spain mana n'etiti ndị Europe ndị ọzọ.
Ihe ị ga-ahụ na Alquézar
Anyị na-agwa gị ihe a pụrụ ịhụ ma mee n'obodo Alquézar, nke dị na Huesca, nwere obodo ochie mara mma na ụzọ ụkwụ.
Osimiri nke ịgbachi nkịtị, na Asturias
Osimiri gbachi nkịtị. Lee aha! Ya mere uri, di omimi, mmadu apughi inye aka icho ka o zute ya, nri? ...
Mogarraz, njedebe na Salamanca
Taa, anyị na-anọ na Spen maara otu n'ime ọtụtụ obodo mara mma: Mogarraz. Ọ bụ obere, ọ dị ka zoro ezo na ...
Ihe ị ga-ahụ na Palos de la Frontera
Obodo Palos de la Frontera na-enye ọtụtụ ebe ị ga-ahụ, na mgbakwunye na ụzọ sitere na Nchọpụta America.
Tahiti bụ agwaetiti French nke yiri paradaịs. Ọ dị anya, osisi, nwee obi ụtọ, ọgaranya na ọnụ, mana n'ezie ...
Discover Rascafría na Madrid
N'ime nnukwu ndagwurugwu dị elu nke Lozoya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 100 nke elu na n'etiti ugwu abụọ, ọ dị ...
Ihe ị ga-ahụ na Cuenca
Anyị na-egosi gị ihe niile a pụrụ ịhụ n’obodo Cuenca, tinyere ụlọ ndị ama ama ama ya, ebe ngosi ihe mgbe ochie na oghere ndị ọzọ.
Ogige Trafalgar, nke dị na London
London bụ obodo cosmopolitan par nke kacha mma. Ekwenyere m na n'echiche a ọ karịrị New York, ọ bụ ezie na taa ...
Obodo Krakow nke ndị Juu
Otu n'ime ebe kachasị adọrọ mmasị na Krakow bụ mpaghara ndị Juu ya, nke a makwaara dị ka Kazimierz, ọ bụ ...
Anyị na-agwa gị ihe niile nwere ike ịhụ ma mee n'obodo Covarrubias, nke dị na Burgos, obodo mara mma nke oge ochie.
England bu onye nwe ihe di egwu, mara mma, odida obodo, i nweghi ike ikwenye na akwukwo ndu nke obodo ya, ndi ...
Kedu ihe ị ga-ahụ na Formentera
N'ebe ndịda nke Ibiza, agwaetiti Formentera bụ nke kasị nta na Balearic Islands na nke kacha mma ...
Ihe ị ga-ahụ na Valldemossa, Mallorca
Anyị na-agwa gị ihe niile a pụrụ ịhụ ma mee n'obodo Valldemossa, nke dị na Sierra de Tramuntana na agwaetiti Mallorca.
Fragas do Eume, oke osisi nke Galician
Anyị na-agwa gị ihe ị nwere ike ịhụ na Fragas do Eume, ogige ntụrụndụ nke nwere oke ohia Atlantic dị na mpaghara A Coruña.
Ihe ị ga-ahụ na Cíes Islands n'ụsọ oké osimiri Galician
Anyị na-agwa gị ihe niile nwere ike ịhụ ma mee na Cíes Islands nke ụsọ mmiri Galician, ezigbo paradaịs nwere osimiri mara mma na ụzọ ụkwụ.
Goldenlọ-edo edo, na India
India bu ebe di egwu. Ọ bụghị maka mmadụ niile, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-ekwu na njem ị gara India gbanwere ndụ….
Islọ oriri na ọụ Lụ Lisbon
Anyị na-enye gị ụfọdụ echiche iji nọrọ na họtel kachasị mma na Lisbon, ezigbo ụlọ obibi okomoko nke na-enye ebe mara mma na etiti.
Ihe ị ga-ahụ n'àgwàetiti Tabarca
Anyị na-agwa gị ihe ị ga-ahụ na otu esi aga agwaetiti mara mma nke Tabarca, ebe nwere ọtụtụ ihe nketa na osimiri ndị njem mara mma.
Spain nwere ntọala eke mara mma ma otu n'ime ha bụ Cañón del Río Lobos Natural Park, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ...
Ihe ị ga-ahụ na Ulaanbaatar
Isi obodo Mongolia, Ulaanbaatar, nwere ike ọ gaghị adị na ndepụta nke ebe nrọ na-aga maka ọtụtụ ...
Ihe ị ga-ahụ na Setenil de las Bodegas
Anyị na-agwa gị nke bụ ebe mmasị na obodo ọcha nke Setenil de las Bodegas, obodo na-atọ ụtọ nke Andalusia nke dị na mpaghara Cádiz.
Ebe obibi ndị mọnk nke Nkume, otu ihe na-adọrọ mmasị na Zaragoza
Spain nwere ọtụtụ njem nleta na mgbe ụfọdụ ị na-eche ihe kpatara ị ji aga njem ụwa mgbe enwere ọtụtụ ...
Anyị na-abanye n'oge ọkọchị, ma ọ bụrụ na anyị agaghị ezumike ma, echiche nke ịnọ n'ụsọ mmiri na-enweta mmiri ...
Ihe ị ga-ahụ na Northern Ireland
Ruo ọtụtụ afọ Northern Ireland anọghị na map ndị njem, nke nwanne ya nọọrọ onwe ya na ndị ...
Ihe ị ga-ahụ na Riga, Latvia
Anyị na-agwa gị ihe a pụrụ ịhụ n’obodo Riga, isi obodo Latvia, obodo nke nwere ọmarịcha ámá na ihe ncheta.
Krabi, iju na Thailand
Thailand nwere ọtụtụ ala mara mma mara mma. N'ihe banyere okike, obi abụọ adịghị ya na Thailand bụ paradaịs na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ ... ...
Otu izu na Corsica
Mediterenian nwere ọtụtụ agwaetiti ma naanị atọ buru ibu ma n'etiti ha bụ Corsica, paradaịs nkịtị ...
Anyị na-agwa gị ihe niile nwere ike ịhụ na Mont Saint Michel mara mma na mpaghara French na Normandy, nleta dị mkpa.
Ọ ga-amasị gị ịga ezumike gaa njem n'Africa? Africa nwere ebe di egwu, ma na kọntinenti ma na ...
Ihe mara mma nke Hpa-an, na Myanmar
Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia bụ ndọta maka ndị na-eme njem azụ, ndị hụrụ okomoko Asia na oke ala mara mma. Ma gịnị kpatara mgbe niile ...
Ndagwurugwu Carranza, ọdịdị na ọdịbendị
Spain bụ a-akpali nnọọ mmasị mba ileta. Otu nkuku nwere nke ya ma taa ozo nke ...
Ogige Krka National, Croatia
Kroeshia, pealu ọhụrụ na maapụ ndị njem nleta na Europe, nwere ọtụtụ ebe mara mma mara mma ma otu n’ime ha ...
Ihe ị ga-ahụ na Maafushi na Maldives
Anyị na-agwa gị ihe ị nwere ike ịhụ ma mee n'àgwàetiti Maafushi na mpaghara Maldives, bụ ebe ndị njem nleta nwere oke osimiri mara mma.
Temlọ arụsị rụrụ arụ nke Khajuraho, India
India nwere ihe niile site na nnukwu osimiri, site na obodo ndị dị egwu na ọmarịcha ala na ụlọ nsọ na ebe nsọ nke mba ...
Ihe ị ga-ahụ na Sighisoara, Romania
Obodo Sighisoara dị na Romania ma nwee ọmarịcha ebe nchekwa akụkọ mgbe ochie ochie nke nwere nnukwu mmasị.
Ninh Binh, paradaịs na Vietnam
Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia niile bụ akwụkwọ ozi nke akwụkwọ ozi ndị a na-agaghị echefu echefu, ma maka ala ahịhịa ndụ ya na akụ ọdịnala ya…
Ulaanbaatar, isi obodo kachasị emetọ n'ụwa
Mongolia bụ mba dị n'Eshia dịpụrụ adịpụ nke dị n'oge Agha Nzuzo n'okpuru orbit nke ...
Salinas de Añana, akụ nke mba Basque
Ngwunye nnu dị ezigbo mma iji lee ma enwere ụfọdụ na-enye anyị foto ndị dị egwu. Ihe dị mma bụ…
Ihe ị ga-ahụ na Périgord Noir
Mpaghara Périgord Noir dị na France ma na-enye anyị ihe niile site n'ọgba ndị gara aga ruo na ọmarịcha obodo ndị mara mma.
The amara nke Nepal
Asia bu uzo njem di egwu. O nwere ihe niile, akụkọ ihe mere eme, ọdịdị ala, ọdịbendị, okpukpe ... njem ọ bụla n'akụkụ ...
Leslọ nke Peles
Otu n'ime ebe ndị mmadụ na-abịa na Romania bụ Sinaia, nke bụ́ ugwu ugwu na Ndagwurugwu Prahova ...
Ihe ị ga-ahụ na Sierra de Gata
Anyị na-agwa gị ihe niile nwere ike ịhụ ma ọ bụ mee na mpaghara okike nke Sierra de Gata, oghere a na-amaghị ama na obodo ndị jupụtara na amara.
Site na nnukwu ụlọ nke Valladolid
Spain jupụtara na ụlọ, ọ bụ paradaịs maka ndị niile Fans na-emepechabeghị anya ma ọ bụ nke ochie asy.
Osimiri na-enye nkịta ohere na Cantabria
Ihe ị ga-ahụ na La Alberca
Anyị na-agwa gị ihe niile a pụrụ ịhụ ma mee n'obodo La Alberca, ebe mara mma dị na mpaghara Salamanca.
A ije site na Montenegro
Montenegro bụ otu n'ime obere mba na Europe yana otu n'ime ọmarịcha mma ị nwere ike ịchọta ...
Ogige Hyde, ogige ntụrụndụ nke dị na London
Ogige ntụrụndụ na-achọ obodo mma ma bụrụ ezigbo ebe ịga ije, na-ahụ ụda ebe ahụ ma na-ezu ike n'oge ...
Na ụkwụ nke Sierra Morena na 8 kilomita site na Córdoba dị Medina Azahara, obodo omimi nke ...
Gaa na British Museum
Europe nwere ọnụ ọgụgụ dị nta nke ebe ngosi ihe mgbe ochie dị oke mkpa maka uru nke mkpokọta ha, otu n'ime ha bụ ...
Arrison del Duero ogige ntụrụndụ
Anyị na-egosi gị ihe niile nwere ike ịhụ ma mee na Arbis del Duero mpaghara okike na obodo kwụ ọtọ nke Castilla y León.
Ihe ị ga-ahụ na Saint Jean de Luz
Obodo San Juan de Luz bụ ebe ntụrụndụ n'oge ọkọchị nke nwere ụlọ akụkọ ihe mere eme mara mma na-agbakwunye amara.
Gaa na Arc de Triomphe, na Paris
Paris nwere ndepụta nke ebe ị na-agaghị echefu ma ọ nwere nnukwu ụlọ na-achịkwa ...
Ihe ị ga-ahụ na Zumaia
Anyị na-agwa gị ihe niile ị nwere ike ịhụ na obodo Basque nke Zumaia, obodo nwere ebe akụkọ ihe mere eme na ọdịdị mara mma mara mma.
Buckingham Obí, nleta ndị eze na London
London nwere ọtụtụ ebe nkiri n'ihi na ọ bụ obodo akụkọ ihe mere eme ma bụrụ nke ukwuu, mana enweghị obi abụọ ma ọ bụrụ nke gị bụ ...
Auschwitz, ụjọ nke akụkọ ntolite
Otu n'ime ihe mmụta nke Agha Worldwa nke Abụọ hapụrụ anyị bụ ihe jọgburu onwe ya ...
Ihe ị ga-ahụ na Strasbourg
Anyị na-agwa gị ihe niile enwere ike ịhụ na obodo mara mma nke Strasbourg nke France, ya na katidral ochie ya, n'ámá na Petite France.
Torre del Mar na ọtụmọkpọ ya
Oge ọkọchị na-abịa, anyị echeworị echiche maka ebe ezumike anyị. Ànyị dị ka oké osimiri, na-agba mmiri ...
Na-eje ije na Orbaneja del Castillo
Ngagharị ndị dị n'ime ime obodo bụ ejiji ma ọ bụ ezigbo ụzọ esi apụ n'obodo, zuru ike, ...
Anyị na-agwa gị ihe niile anyị maara banyere obodo Orbaneja del Castillo, obere obodo dị na gburugburu ebe obibi mara mma.
Grotto nke ihe ijuanya, ihe ijuanya na Huelva
Ogbu mmiri nke ụwa adọtala ụmụ mmadụ dịka igwe. Anyị na-eleda anya, anyị na-ele anya ...
Oma ohia, ohia nwere nka
Otu enyi m guru nka na agwa m na Oma Oma bu ihe aka. Amaghị m ọtụtụ ihe gbasara ...
Ihe ị ga-ahụ na Cangas de Onís, Asturias
Anyị na-egosi gị ihe niile ị nwere ike ịhụ na njem site na obodo Asturian nke Cangas de Onís, nke dị nso na Lakes nke Covadonga.
Mgbe anyị chere echiche maka ịgagharị na Gris, o doro anya na anyị enweghị ike ịhapụ ịtụnanya nke agwaetiti ya. Ha bụ ...
Gaa na Obí nke Versailles
Na-eme njem na France nke oge opupu ihe ubi a ma chọọ ileta ọmarịcha Obí nke Versailles? Will gaghị akwa ụta na ya,
Towerlọ Elu Gold
Odi na aka ekpe nke odo odo Guadalquivir bu Torre del Oro di na Seville. A zụlitere ya na ...
A ije site na Central Park
Otu n'ime ebe kacha maa atụ na New York bụ Central Park, ogige etiti a maara n'ụwa niile maka ihe nkiri na telivishọn. Gịnịkwa mere ị ga-eji New York? Echela ọbụna banyere ịgagharị site na Central Park mara mma!
Ihe ị ga-ahụ na ndagwurugwu Aran
Anyị na-agwa gị ebe niile ị nwere ike ịga na mpaghara Aran Valley na Lleida, nke dị na Pyrenees Catalan.
Ogige Ntụrụndụ Cabárceno, na Cantabria
Dị nnọọ nso na obodo Santander bụ ogige ntụrụndụ a nke nwere ụdị ndị na-abụghị ...
Ihe ị ga-ahụ na Zahara de los Atunes
Anyị na-agwa gị ihe niile ị nwere ike ịhụ ma mee na obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri nke Zaraha de los Atunes, nke dị na Cádiz.
Buitrago del Lozoya na ọtụmọkpọ ya
Ọ bụrụ na-amasị gị obodo ochie, ebe ntụrụndụ dị mma bụ Buitrago del Lozoya, nke na-adịghị anya na Madrid ...
Nlegharị anya na Black Forest
Aha «Black Forest» na-ezo aka na ihe eji eme uto ma obu ebe mara mma nke Europe….
N'ihu ugwu Maro na site na acha anụnụ anụnụ nke Osimiri Alboran, ọ dịghị ihe na-egosi na n'okpuru ...
Sierra de Gredos, okike na kpakpando
Sierra de Gredos dị na Spain, ọ gbatịpụrụ site n'ọtụtụ ógbè ma kwupụta akụkụ ya ka ogige mpaghara….
Ihe ịhụ na ime na Taramundi
Chọpụta ihe a pụrụ ịhụ ma mee n'obodo Taramundi, ime obodo dị na Asturias nke na-enye nnukwu ihe nketa.
Zahara de la Sierra, ebe njedebe na Cádiz
Spain nwere ọtụtụ ịrịba ebe na oké njegharị ime na a ụbọchị ole na ole anya. Otu n'ime njem ndị a bụ ...
Ihe ịhụ na otu esi aga Luarca
Anyị na-agwa gị ihe niile a pụrụ ịhụ na otu ị ga-esi ruo obodo azụ Luarca, ebe ndị njem nleta dị na Asturias.
Kedu ihe bụ fjords Norwegian?
Ndi mmadu nile m mara ndi njem site na fjords nke Norway abiaghachila n’egwu. Ọdịdị na ...
Ihe ị ga-ahụ na Puebla de Sanabria
Anyị na-agwa gị ihe niile ị nwere ike ịhụ na obodo Puebla de Sanabria mara mma, nke dị na mpaghara Zamora na Castilla y León.
Nlegharị anya na Oké Osimiri Nwụrụ Anwụ
Otu n’ime ebe kacha sie ike n’ụwa bụ Osimiri Nwụrụ Anwụ. N'ezie ị nụrụ banyere ya ma nwee ...
Anya London, dị na London
Ọtụtụ obodo nwere nnukwu ebe nkiri, echiche, echepụtara ma rụọ ya na echiche ndị njem. Otu ihe atụ bụ London ...
Osimiri Katidral na Lugo, Galicia
Playa de las Catedrales bụ aja aja dị na mgbago ugwu nke mpaghara Lugo dị na Galicia, amaara maka usoro okwute ya.
Paradores na Galicia
Anyị na-ekwu okwu banyere Paradores na Galicia, netwọk nke ụlọ ndị dị na ụlọ akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ ụlọ nke ọdịbendị pụrụ iche.
Ọgba nke Drach
Anyị na-agwa gị otu esi esi ebe ahụ na ihe niile nwere ike ịhụ na Drach Caves a ma ama na agwaetiti Mallorca, nke dị na Porto Cristo.
Gaa na Ugwu Fuji
Ihe nnọchianya nke Japan bụ Ugwu Fuji. Onye obula nke manga, anime ma obu ihe nkiri Japanese mara ya ...
A ije site na Water Park, na Zaragoza
Ọtụtụ n'ime ụlọ ndị e wuru karịsịa maka ihe ngosi ma ọ bụ ihe ngosi mba ụwa ga-akwụsị ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụ ikpe…
Ihe ị ga-ahụ na Ría de Arousa
Anyị na-agwa gị ihe niile ị nwere ike ịhụ na Ría de Arousa, nke dị n'ụsọ oké osimiri Galicia ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ obodo mara mma.
Isi obodo Poland, Warsaw, bụ taa obodo mara mma nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ abụọ bi ebe ...
Florence bụ otu n’ime obodo ndị mara mma n’ Italytali. Ọtụtụ mmadụ na-aga ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ na njem ka ukwuu na mba ahụ, mana m, ị na-aga njem na Florence? Ọfọn, gaa na Katidral nke Floerncia ma ọbụlagodi na ike gwụrụ gị, rịgoro ihe karịrị narị 400 gaa dome ya. The echiche dị ukwuu!
Katidral St Paul, London
Europe juputara na uka ma England adighi iche. Iji maa atụ, na London, ị ga-ahụ ọmarịcha Katidral St. Paul, ụlọ nsọ Anglịkan. Are na-aga London? Echefula ileta Katidral nke San Pablo na akụ ya: veranda, dome, crypt, choir, chapels. Kpamkpam ihe niile!
Mbibi Rom ndị kacha mkpa
Anyị na-egosi gị ụfọdụ mkpọmkpọ ebe Rome nke Alaeze Ukwu Rome nke ka nwere ike ịga na mba dị iche iche.
Ugwu kachasị elu na Europe
Echere m na onye ọ bụla maara na ugwu kachasị elu n'ụwa bụ Everest ... mana ị maara ihe ọ bụ ...
Ogige ntụrụndụ mba ụwa
Anyị na-ekwu maka ụfọdụ ogige mba kacha mma n'ụwa, nwere oghere sitere n'okike nke enweghị mma na ọnụ ụlọ.
Ebe aga njem ịmụ asụsụ bekee
Uru kasịnụ nke ịmụ asụsụ bụ inwe ike isoro ndị ọzọ kwukọrịta, yabụ mgbe ị na-amụ asụsụ ọ bụ ...
Ọnụ Eziokwu, nke Rome oge ochie
Rome bụ obodo mara mma. Ahụrụ m ya n'anya n'ihi na ị nwere ike ịga ije ogologo ụbọchị dum ma na-eju oge niile ...
Dome nke Nkume
Na Esplanade nke alakụba nke Jerusalem bụ Dome nke Rock, ụlọ nsọ Alakụba dị nsọ nke na-anata ...
Agwaetiti Gili mara mma
Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia nwere ọdịdị ala kwesịrị ekwesị maka Paradaịs ma ụfọdụ n'ime ha nyere site na Gili Islands, dị nso na Lombok, ...
Kedu onye na-agụghị ma ọ bụ gụọ akụkọ banyere Little Mermaid? Ma ọ bụrụ na edebeghị ya na usoro ahụ ...
Funzọ na-atọ ụtọ ma dịkwa ọnụ ala nke njem nke ọtụtụ ndị na-eto eto na-amalite usoro ọmụmụ njem ha kwa afọ ka a na-akpọ ...
Teide ụgbọ ala USB, ihe mara tupu ịga
Otu n'ime ebe anyị na-agaghị agbaghara n'oge njem anyị gaa agwaetiti Tenerife bụ Teide, the ...
Enwere ọtụtụ ihe ncheta oge ochie nke na-eme ka anyị nwee ụjọ ma na-eju anyị anya, kedu ka ha si mee ya n'ụwa? Ma gịnị ...
Ebe Azụmaahịa Worldwa
Ejima elu ndị World Trade Center e hiwere na 1973 na dabara na ama-eyi ọha egwu wakporo nke 2011….
Grutas de San José, na-achọpụta osimiri kacha ogologo n'okpuru ala na Europe
Dabere na Vall d'Uixó, ọkachasị na Sierra de Espadán Natural Park, anyị hụrụ Caves nke ...
Ihe Millau Viaduct
Nature na enye anyi otutu ihe ebube, mana nke bu eziokwu bu na mmadu na eme kwa nke ya na ndi ozo ...
Igwe mmiri na-ekpo ọkụ nke Budapest
Budapest bụ isi obodo Hungary, obodo ochie na ogologo oge obodo ama ama maka ...
Caplọ ihe ngosi nka nke Capitoline nke Rome
Tinyere Vatican Museums, a na-ahụ Capital Museums nke Rome anya dị ka ndị kachasị mkpa na isi obodo ...
Ihe ị ga-ahụ na Biarritz
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-echeworị maka oge ọkọchị ọzọ n'ihi na ị naghị anabata oge oyi, ị nwere ike ...
Ihe ị ga-ahụ na Liverpool
Liverpool bụ otu n'ime obodo ndị ama ama na England ma gafeela narị afọ asatọ. Ị maara? Ọzọkwa, o nwere ọtụtụ ebe. Are na-aga England? Gaa Liverpool ka ị mụtakwuo banyere Beatles, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ nwee ọ portụ mpaghara ọdụ ụgbọ mmiri ya arụzigharịrị.
Isla de Lobos, nke kasị nta nke obere agwaetiti Canary
N'ime akuku Canary nile, Furteventura kacha nso na Afrika. Dị nnọọ n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke ...
Lọ nsọ nke Angkor, dị ịtụnanya na Cambodia
Otu n'ime ebe nlegharị anya na ebe nlegharị anya mara mma na Cambodia bụ ụlọ arụsị nke Angkor, nkume dị mgbagwoju anya nke mmiri ozuzo kpochara. Ọ bụrụ na ị gaa njem na Cambodia ị gaghị echefu ụlọ nsọ nke Angkor, ma ọ bụ karịa ma ọ bụ karịa Pyramids! Nke Egipt!
Kpokọtara Cliffs nke Moher
Ugwu nke Moher bụ otu n'ime njem nleta ndị njem nleta nke Ireland na ee, ha bụ anwansi. Ọ bụ ihe ịtụnanya na ị ga-egbutu ụwa na mberede ya Ọ na - amasị ọnụ ọnụ ugwu? Mgbe ahụ, echefula Cliffs nke Moher, na Ireland: nzukọ dị egwu nke ala, oké osimiri na mbara igwe.
Ihe ị ga-ahụ na Florence
Florence bụ isi obodo nke Tuscany Italiantali mara mma, obodo oge ochie, mara mma, mara mma ma jupụta na ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme. Ihe niile ebe a bụ na-akpali na Florence bụ oké njem nleta ebe ke Italy na ị gaghị na-atụ uche ya. Art na akụkọ ihe mere eme ngosi ihe mgbe ochie, ochie n'okporo ámá, n'ámá, osimiri, ugwu na, n'ezie, nri!
Ndagwurugwu Ọnwụ, njem nlegharị anya na United States
Dị ka aha ya na-egosi, Ndagwurugwu Ọnwụ dị ka ndagwurugwu ọnwụ: ọ dị ukwuu, ọ bụ ọzara, ọ na-acha ntụ ntụ, o yighị ka ọ na-ebute ndụ. Ọ bụ ndagwurugwu nwere Ndagwurugwu Ọnwụ nke na-anwụghị ma ọlị kama ọ na-esi ndụ na ndụ, abalị na ehihie? Ogige Ntụrụndụ Ọnwụ na-echeghị oke okpomọkụ, yabụ mara na pel ndị njem a nke United States.
Gagharịa na Châteaux nke Loire
Ọ bụrụ n’ịga ịnọ na Paris ụbọchị ole na ole, ị nwere ike ịdebanye aha mgbe niile maka njem nke nnukwu ụlọ Loire. Site n'ụzọ ọ bụla ị ga-ama ha niile, ha dị ole na ole, Europe jupụtara na ụlọ, mana ọ dịghị ihe dịka ụlọ Loire mara mma ma mara mma na France. You debanyere aha iji zute ha?
A njem mara mma Victoria Falls
Tụgharị uche n'ịdị ebube Victoria Falls bụ otu n'ime ahụmịhe onye njem ọ bụla chọrọ ịnwe ma ọ dịkarịa ala otu ...
Selva de Oza, ọdịdị na njem
Anyị na-aga n'ihu na atụmatụ njem njem anyị n'èzí, n'okpuru mbara igwe, na kọntaktị na okike na n'etiti ugwu. Is nwere mmasị n'ịgagharị, ahịrị ahịhịa, ịrị ugwu, na-aga ije n'etiti osisi izizi na osisi beech? Mgbe ahụ gaa leta Selva de Oza na ịma mma ya.
Njirimara nke ụlọ nkwari akụ na-enweghị ụmụaka
Anyị na-agwa gị nkọwa niile nke ụlọ nkwari akụ na-enweghị ụmụaka ma ọ bụ naanị maka ndị okenye, oghere ndị ọkachamara na njem nlegharị anya maka ndị okenye na ndị di na nwunye.
Lacuniacha, okike na-enwu
Lacuniacha bụ aha ebe pụrụ iche ma zuru oke maka ndị hụrụ okike niile. Ọ bụ ogige anụ ọhịa, yabụ ọ bụrụ na ị masịrị ha, ị nwere mmasị anụmanụ ma ọ bụghị zoos? Gaa na ogige Launiacha nke anụ ọhịa, nke dị na Aragon. Paradaịs nkịtị!
Fuerteventura bụ otu n’ime agwaetiti kachasị mma na agwaetiti pụrụ iche na Canary Islands n’ihi oke ala ya na ugwu mgbawa ya….
Ogige Zugarramurdi, akụ na Navarra
Navarra dị ka ụzọ nke Actualidad Viajes n'oge na-adịbeghị anya, ọ nwere ọtụtụ akụ na ụba akụkọ ihe mere eme, ọdịbendị na nke okike. Taa, ndi Ndi amoosu na oku oku ka ichoro? Ọfọn, gaa Navarra ma mara Caves nke Zugarramurdi, ama ama maka ememme ndị ọgọ mmụọ ha.
Kedu ihe bụ ihe ndina ahụ
Couchsurfing bụ ụzọ iji nọrọ n'efu na ebe ọ bụla n'ụwa ma ọ bụrụ na ị ...
Ebe obibi ndị mọnk nke Leyre
Izu a anyị na-ekwu maka amara dị n’etiti Aragon na Navarra, ebe nchekwa Yesa. N'etiti ebe nlegharị anya nke ebe a anyị na-akpọ aha you na-amasị ndị mọnk nke oge ochie? Gaa njem mara mma na Navarra: Ebe obibi ndị mọnk nke Leyre, ebe ndị eze mbụ nke Navarre zuru ike.
N’etiti Navarra na Zaragoza bụ ọdọ mmiri ị na-ahụ na foto a: Osimiri Yesa. Likemasị gị? Ọ bụ ala mara mma nke nwekwara akụkọ ntolite ya, yabụ Ọ bụrụ na ịchọọ agwa, obodo ndị a gbahapụrụ agbahapụ, ebe obibi ndị mọnk ochie na anyanwụ, echefula ebe nchekwa Yesa.
7 egwu ụwa na-awụ akpata oyi
Egwuregwu bụ akụkọ ọdịnala ọdịnala nke ndị mmadụ na-etolite njirimara ya ma na-ebufe ya site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ ...
Ebe 6 dị na Pyrenees nke Catalan ị kwesịrị ịchọpụta
North nke Iberian Peninsula, n'etiti Andorra, Spain na France, bụ Pyrenees, ugwu ugwu nke ...
Ihe ị ga-eme na Benidorm
Oge oyi ọ bụ maka oge ọkọchị? N'ezie! Ọ bụ mgbe anyị na-atụ uche anyanwụ na ikpo kasị, n'ihi ya, ọ na-eme ka ị chọrọ ka atụmatụ gị ezumike.Benidorm bụ oké osimiri na nightlife ebe na Spain na niile nke Europe. Sands ọla edo, kristal doro anya mmiri, ọtụtụ anyanwụ, ọtụtụ ndị ọzọ.
Toga Ndagwurugwu Nuria
Spain nwere ịrịba ebe na ọ bụrụ na-amasị gị ọdịdị na n'èzí njem mgbe ị nwere ike ịga ógbè Gerona, na Catalonia, oyi na-abịa otú i nwere ike na-eme atụmatụ a skai njem. You maara Ndagwurugwu Nuria na ọdụ ya? Ọ bụ jụụ, mara mma na maara.
Getaways na ụmụaka
Na-eme atụmatụ ịgbapụ ezinụlọ? You kpebirila ebe ị chọrọ ịga? Na echiche na ị ...
Ala Jutland Peninsula bụ ọmarịcha olu ala abụọ nke mba abụọ kesara. Otu akụkụ bụ German na nke ọzọ bụ Danish. Ọ nwere mara mma mara mma nke ukwuu. Went gara? Ọ dị mma, o nwere ọtụtụ akụkụ mara mma na ụfọdụ mara mma dị na mpaghara Jutland.
Isi obodo Middle East
Etiti ọwụwa anyanwụ. Mpaghara ụwa a anọwo na akụkọ akụkọ oge niile n'okpuru afọ iri ise. Otu n'ihi na ọ bụ mpaghara Middle East, ọ nwere obodo ochie na ọgaranya na akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị. Ha abụghị ndị kasị dịrị nchebe ma ọ bụrụ na-amasị gị njem ...
Ebe maka ime njem
Oge mgbụsị akwụkwọ a, enwere ọtụtụ ezumike zuru oke maka ịme njem. Site n'ebe ugwu gaa na ndịda na site na ...
Ihe ncheta kachasị mkpa n'ụwa
A ga-eleta ihe ncheta kachasị mkpa n'ụwa ma ọ dịkarịa ala otu oge na ndụ gị, yabụ anyị ga-eme obere ndepụta.
Ebe obibi ndị mọnk nke Royal nke San Juan de la Peña
Ọ bụrụ na Spain jupụtara n’ihe, ọ bụ ụka na ebe obibi ndị mọnk, ọ bụghị ya? Ọfọn, na Aragon anyị hụrụ nke a anyị na-ahụ na foto ahụ: Royal Monastery nke Spain nwere ọtụtụ ebe obibi ndị mọnk na otu n'ime ihe kachasị, n'ihi ọnọdụ ya, bụ Monastery Royal nke San Juan de la Peña.
Ogige Ntụrụndụ Komodo
Planetwa anyị nwere ogologo akụkọ dịgasị iche iche ma ọ bụ ezie na anyị kwenyere na ọ bụ okike, eziokwu bụ na n'oge ụfọdụ anyị amaghị Komodo dragons? Nnukwu anụ ọhịa na-akpụ akpụ nke bi n’agwaetiti ndị Indoneshia. Saịtị mara mma ma ọ bụrụ na-amasị gị ihe okike.
Obodo ndị mara mma dị nso na Barcelona
Katalonia n'ozuzu ya na mpaghara Barcelona nwere ọtụtụ obodo mara mma ileta ...
Obodo ndị mara mma dị nso na Madrid
N’afọ 2017 gara aga, obodo Madrid natara ihe karịrị mmadụ nde iteghete na-ejegharị ejegharị. Nke pụtara na mmụba na ...
Ezigbo ụlọ mara mma na Spain
Lee nhọrọ! Eziokwu bụ na o siri ike ime ndepụta nke ụlọ ndị mara mma na Spain ... E nwere ọtụtụ! Na ihe ibiere nwere ike Spain nwere ọtụtụ mara mma ụlọ, ọ ga-ekwe omume ime a ndepụta? Anyi anwalee ya lee ma ị masịrị otu ndị ahụ.
Fushimi Inari, ụlọ nsọ nke otu puku ọnụ ụzọ
Japan nwere ebe magburu onwe ya na ndụmọdụ m bụ ịga leta ya ọtụtụ oge n'ihi na naanị otu ezughị. Ana m aga nke anọ m ma a ka nwere ọtụtụ ndị fọdụrụ. Are na-aga Japan ma na-eme atụmatụ ịga leta Kyoto? Gaa njem naanị nkeji ise wee gaa Shrine nke Fushimi Inari, nke nwere ọnụ ụzọ puku.
Otu UNESCO siri kọwaa Biosphere Reserve, Las Bardenas Reales bụ ogige eke nke mara mma na ọdịdị ala ...
Ọdọ agba ọbara
Slovenia bụ mba nke ji nwayọ na-enweta ọnọdụ n'etiti njem ndị njem Europe. Mara mma! N'etiti obodo ochie ya na otu n'ime pel ndị njem nleta na Slovenia bụ Lake Bled. Ọ dị ka akụkọ ifo! Island, ọmarịcha ụka, ochie castle ...
Ihe ị ga-ahụ na Oslo
Taa akwụkwọ akụkọ mpụ na usoro ihe omume telivishọn nke si n'ebe ugwu Europe na-ewu ewu. Na Netflix, enwere ọtụtụ ihe ndị Swedish, Oslo bụ obodo mara mma ma ụbọchị ole na ole ị nwere ike ịga njem nlegharị anya ya kachasị mkpa: ebe ewusiri ike, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, ụgbọ mmiri Viking ...
Ihu nke Mahadum Salamanca
Mahadum Salamanca, nke hibere na 1218 nke Eze Alfonso IX nke León, ka a na-ewere dị ka onye kacha ochie ...
Oberammergau, obodo akuko mmuo
E nwere ọtụtụ obodo na Europe nke yiri ka ọ bụ site na akụkọ ifo ndị anyị na-agụ dịka ụmụaka. Germany nwere otutu ma otu n’ime ha bu obere obodo. Ya mere, mgbe ị na-aga Germany gaa na Oberammergau, obodo ndị gara aga na obodo baroque.
Enwere ụzọ na ụzọ, ụzọ ndị na-eduru anyị site na mbara ala mara mma na ndị ọzọ na-adaba anyị na akụkọ ntolite nke ije na okpukperechi. Nke ikpe azu Otu n’ime uzo ihe nlere anya ndi njem nlegharị anya na Spain bu uzo Cistercian: o jikọtara okpukperechi, ije na akuko gbasara kilomita ole na ole.
Obí nke ndị isi nke Infantado, na Guadalajara, bụ ụlọ kachasị mma na obodo Castilian-La Mancha. Kwuru ihe ncheta ...
Towerlọ Elu nke Pisa
Mmadu enweela obi uto iru elu ma uwa juputara na owuwu nke na-agbali igbacha elu igwe ma obu iru igwe ojii. In Ọ bụrụ na ị gaa njem na Italytali, echefula Towerlọ Elu nke Pisa. Sñi, ụlọ elu a ma ama na-ada ada. Ọ dị nso na Florence.
The Valle de Nuria bụ ndagwurugwu dị na Pyrenees nke dị mita 2.000 n’elu oke osimiri na ...
Haswa nwere ebe dị iche, ebe ndị yiri ka ọ bụ aka ọrụ na njiri aka nke onye a na-amaghị ama ka a pịrị apị. Nke a bụ ihe banyere Mallos de Ọ bụrụ na ịchọrọ ịrịgo ma ọ bụ ịrị ugwu wee gaa Huesca wee mee ya na Mallos de Riglos dị egwu. Nkume dị elu, ọdịdị dị iche!
Ebe nsọ nke Fatima
Na Portugal enwere ọtụtụ ebe mara mma ma mara mma ma anyị na-ekwu maka ụfọdụ n'ime ha ebe a na Actualidad Viajes. Taa bụ oge nke ya.Ọ bụrụ n’ị gara ileta Lisbon, echefula ịgagharị Santaurio de Fátima, ọ dị ezigbo nso, ọ mara mma, buru ibu ma juputa na ihe omimi.
Towerlọ Elu nke Belém
Y’oburu na ichota ulo, otutu ulo na ihe owuwu kwesiri ka amara ya n’onwe gi. Dịka ọmụmaatụ, Portugal nwere ọtụtụ ụlọ. Are na-aga njem Lisbon? Echefula ileta Torre de Belém mara mma. Ọ mara mma n'èzí na n'ime ya site na mbara ala ya bụ ihe kachasị.
Ebe obibi ndị mọnk nke Guadalupe
Europe jupụtara na chọọchị na ebe obibi ndị mọnk na ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị mma na Spain. Nke a bụ ihe gbasara ebe obibi ndị mọnk nke Guadalupe, otu n'ime saịtị ihe nketa ụwa nke Spain dị na Extremadura ma ọ bụ ebe obibi ndị mọnk mara mma nke Guadalupe. Echefula ya!
Aghụghọ iji zere ịrịa n'oké osimiri
More na ndị ọzọ ndị mmadụ na-atap site na echiche nke na-aga a irughari n'oge ha ezumike….
Otu ụlọ kachasị mma na Malaysia bụ Petronas Towers. O nwere ike ị gaghị ama aha ya mana ị hụla profaịlụ abụọ ọtụtụ oge na Otu n'ime ụlọ elu mara mma kachasị mma n'ụwa bụ Petronas Towers nke Malaysia. Ha bụ okpueze Kuala Lumpur ma ị gaghị echefu ha.
Franklọ Anne Frank
Anyị niile anụla akụkọ banyere Anne Frank. N'ụzọ ụfọdụ ma ọ bụ ọzọ, maka ịgụ akwụkwọ ahụ, maka ihe nkiri ahụ, maka akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ naanị n'ihi na Otu n'ime ụlọ ngosi ihe mgbe ochie kachasị eleta na Netherlands bụ Anne Frank House, ụlọ ebe Anne na ezinụlọ ya zoro na ndị Nazi na WWII
Latin America bụ ite agba agba agbụrụ na ọtụtụ puku afọ nke mmepeanya na ọdịbendị ahapụwo ihe nketa dị mkpa. Eleghi anya, maka onye na-abụghị onye America, ị gaghị aga Ecuador? Ọfọn, ọ bụ obodo mara mma ma nwee ọtụtụ omenala. Kedu maka ịmara ụfọdụ n'ime ha tupu ị gaa? ụkpụrụ, ụdị ejiji, nri ...
Ọ bụrụ na ịmaghị South America, ọ ga-abụ na ị maghị na Bolivia bụ mba nwere ọtụtụ akụkụ, yabụ na ọ gaghị ekwe omume ịsị na ọdịnala ya yana. Are na-aga Bolivia? Ebe a mara mma! O nwere ọtụtụ omenala ọdịnala, ọtụtụ akụkọ ntolite na ọtụtụ nri dị ụtọ! Jide n'aka na ị nwara ntakịrị n'ime ihe niile.
Egwuregwu nke n'ocheeze map
Egwuregwu nke oge ochie bụ ụdị dị ukwuu nke nwere ike ịnwe n'otu akụkọ sitere na anwansi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, site na mmekọrịta ịhụnanya na heroism na ism na-amasị Game nke n'ocheeze? Ọ dị mma, na Ireland na Spain ị nwere ọtụtụ ntọala eke ebe ejirila ọtụtụ usoro nke usoro.
Nleta na Caves nke Artá ​​na Mallorca
Ugba ochie nke Artá ​​dị na Mallorca ma na-enye nleta nleta na-eleta agwaetiti ahụ, yana usoro oge ochie.
Ihe ị ga-ahụ na Rome
Otu n'ime ndị kasị touristic obodo ndị dị n'ụwa bụ doro anya na Rome. Na ọtụtụ puku afọ nke akụkọ ihe mere eme na o nwere ihe maka onye ọ bụla: mkpọmkpọ ebe oge ochie, ụlọ Rome bụ obodo ebighi ebi: chọpụta ihe ị ga-ahụ, ihe agaghị efu, ebe ịga ije, ụzọ gasị ị ga - eso, otu ị ga-esi rite uru n'okporo ụzọ Rome, wdg.
Ihe ị ga-ahụ na Garganta la Olla
Oge ọkọchị na Extremadura? Mgbe ahụ, gafere Garganta la Olla, jee ije n'okporo ámá ya, mara ụlọ ochie ya ma mee ka onwe gị nwee ume na mmiri mmiri ya na ọdọ mmiri ndị ọzọ.
Obodo ndị mara mma kacha mma na Sierra de Aracena (Huelva)
Sierra de Aracena na Picos de Aroche Natural Park, nke a na-akpọkarị Sierra de Huelva, bụ ...
Ihe ị ga-ahụ na Sierra de Cádiz
Imirikiti ndị mmadụ na-ejikọ Cádiz na anyanwụ na njem nlegharị anya n'ụsọ osimiri, iji nwee obi ụtọ ...
Ihe ị ga-ahụ na Niebla, Huelva
Obodo Niebla dị na Huelva na-enye nnukwu ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme, ya na mgbidi ya ama ama na ebe ndị ọzọ nwere mmasị.
Ihe ị ga-ahụ na Évora
N'oge ọkọchị a ị nwere ike ịga mara otu n'ime obodo kacha ochie na nke kachasị mma na Europe: Évora, na Portugal: ụka, ụlọ nsọ ndị Rom, ndị isi ala.
Ihe ị ga-eme na León
León bụ otu n'ime ebe ndị njem nleta na Spain na, ọ bụ ezie na ikekwe amachaghị karịa obodo ndị ọzọ na mba ahụ, ...
Ihe ị ga-ahụ na Marbella
Marbella bụ otu n'ime obodo kachasị mma na Malaga ma bụrụ onye isi obodo nke Coast ...
Ihe ị ga-ahụ na ndagwurugwu Jerte, Extremadura
Valle del Jerte dị na Extremadura ma na-enye ọtụtụ oghere okike mara mma, yana obere obodo ileta.
Ihe ị ga-eme n'àgwàetiti Tavira
Oge okpomọkụ na-abịa! Ọ bụrụ na ị gafere Portugal ị nwere ike ịga n'ụsọ osimiri Algarve wee gaa leta Island nke Tavira na osimiri ya. You nwedịrị ike ịgba ọtọ.
Ihe ị ga-ahụ na Morella
N'oge ọkọchị a, ị nwere ike ịga Morella, obodo dị n'etiti obodo kachasị mma na Spain: ọwa mmiri, nnukwu ụlọ ochie, ojii truffles ...
Spanish Tuscany, ihe ị ga-ahụ na Matarraña (Teruel)
Na nso Oke Osimiri Mediterenian, na ókè-ala Valencia, Aragon na Catalonia ma zoo n'etiti Lower Aragon, Maestrazgo ...
Ihe ị ga-ahụ na Ronda
Ronda bụ otu n’ime obodo ndị kacha ochie na nke mara mma na Spain. Ọ dị na mpaghara Malaga na ...
Ihe ị ga-ahụ na Dinant, Belgium
Kedu ihe ndị saxophone Gothic, ọgba, na katidral nwere? Dinant, obere obodo mara mma na mpaghara Wallonia nke Belgium.
Lamego, ihe ị ga-ahụ na pealu Portuguese a
Na-aga Portugal? Echefula ileta Lamego, nke dị nso na Porto: ọ bụ pearl ndị njem nleta nwere ubi vaịn, nnukwu ụlọ, ụka, ememme na ememme.
Isi iyi nke Osimiri Cuervo
Spain bụ mba na-adọrọ mmasị. Ọ bụghị nanị na-ekwu okwu na ọdịbendị ma ọ bụ gastronomic okwu kamakwa eke. Site n'ebe ugwu gaa na ndịda…
A ije site na Río Mundo na Albacete
N'etiti Sierra del Segura na Sierra de Alcaraz, na Albacete, bụ Los Calares Natural Park ...
Ubi nke Okwu, a ga-ahụ na Tokyo
Are na-aga njem Tokyo? Otu n'ime ubi kachasị mma n'obodo bụ Shinjuku Gyoen, otu nke egosiri na anime The Garden of Words.
Wieliczka Nnu M
Na mpaghara ukwu Krakow, e nwere Wieliczka nnu, nke a na-ewere dị ka ...
Ibi na London, akwadoro?
London bụghị naanị isi obodo nke United Kingdom ma otu n'ime obodo kachasị mkpa n'ụwa niile ma ...
Ebee ka njem na November
November bụ ọnwa nke na-amalite n’oge oyi. Ọ bụ ya mere o ji dị ka ịchọrọ otu ọzọ ...
Mara mma Bays nke Huatulco
Ọ na-amasị gị aja aja ọcha? Mgbe ahụ i nwere ike ịnwale osimiri mara mma nke Bahías de Huatulco, na Mexico Mexico.
Gaa na osimiri kachasị mma na Thailand
Chọpụta nke kachasị mma osimiri na Thailand nke ị na-ekwesịghị ịhapụ njem gị gaa obodo a mara mma, site na ndị na-ekwo ekwo na ndị a na-emetọghị emetọ.
Chọpụta ịma mma nke Mekong Delta
Otu nkume pel ndị njem nleta na Vietnam bụ Mekong Delta, mana ọ bara uru ileta ya ka ọ bụ oke iwe? Ebe a ọmụma, Atụmatụ na ụfọdụ ebe.
Ebee ka njem na October
Foto | Njem njem nlegharị anya nke Asturias you ga - echekwa ụbọchị ole na ole ezumike ma chọọ iji ohere a mee ihe na Ọktọba? Nhọrọ amamihe! Mgbe…
Ebee ka njem na September
Ozugbo July na August gafere, anyị na-ahụ na ezumike gafere ma na-agwụ ike post-depression na-abịarute ...
Cap de Creus, ala, anyanwụ na oké osimiri
Kedụ maka ịmata isi ọwụwa anyanwụ nke Spain? Ọ bụ Cap de Creus., Na Catalonia, ebe jikọtara ala na oké osimiri dị ka ndị ọzọ.
Ebe nsọ nke fireflies, ijuanya na Mexico
Mexico nwere otu n'ime ebe kacha mma ọkụ na-ere ọkụ na ụwa. Chọghi ije n’ime ochichiri nke otutu ihe ihe ngbacha?
Mgbidi ochie nke Ávila bụ akara nke obodo Castilian-Leonese nke biri ogologo oge. Na Spain ọtụtụ n'ime ha bụ ...
Na-aga na ndịda nke Argentina? Hizọ ije na-amasị gị? Mgbe ahụ, echefula ụzọ gaa Black Lagoon: oke ọhịa, nkume, osimiri.
Omenala ndị Japan, dị ka ihe mara mma dịka ọ kachasị
Omenala ndị Japan dị ịtụnanya ma ọ dịghị onye leghaara ya anya mgbe ọ na-ekpebi ịga leta mba ahụ. Na-amaja ihulata, yipụ akpụkpọ ụkwụ gị ma bie ndụ otaku?
Berlin n'ime ụbọchị atọ
Kedu ihe ị nwere ike ịma na Berlin n'ime ụbọchị atọ? Ọfọn, ya mere, onye ndu anyị na 72 hour na Berlin na-akọwa: ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, akụkụ, Mgbidi ...
Agwaetiti atọ dị omimi gbasaa na Europe
N'oge ụfọdụ, anyị niile rọrọ nrọ ịga njem ebe dị egwu na nke na-eme ka anyị bugharịa anyị ...
Utezọ nke White Villages dị n'ebe ugwu nke Cádiz
Anzọ kachasị mma iji mara ndịda Spain, ọkachasị Andalusia, bụ site n'okporo ụzọ gafere obodo ọcha ...
Gaa Leta Nsọ nke Bien Aparecida
Spain nwere ọtụtụ ebe okpukpe dị mma. Gini mere ị gaghị eleta ebe nsọ nke Virgen de la Bien Aparecida, onye nchebe nke Cantabria?
Offọdụ n'ime ọdọ mmiri kachasị mma n'ụwa
Water na-enwe mmasị na mmiri, igwu mmiri, ịgba mmiri, na-ekpori ndụ? Dezie aha ụfọdụ ọdọ mmiri kachasị mma n'ụwa.
Camden Town, London na agbata obi ọzọ
Iji mata ihe kachasị na London, ọ dịghị ihe dị mma karịa ịga Camden Town, agbata obi ama ama maka ahịa ahịa ya ...
London na Jack the Ripper na Sherlock Holmes
Choputa London na ije na Jack the Ripper na Sherlock Holmes. Ọnwụ, ndị metụtara, ndị ogbu mmadụ, ndị iro, atụmatụ aghụghọ niile site na okporo ámá ochie nke isi obodo Bekee.
Cuevas del Soplao, oghere pụrụ iche pụrụ iche n’ụwa
N'ịbụ nke a maara dị ka Sistine Chapel of Geology, Soplao Caves bụ otu n'ime ihe ncheta nke geology ...
Osimiri kacha mma na Cancun
Osimiri Cancun dabara na nkọwa nke paradaịs: mmiri turquoise, ájá ọcha, na anyanwụ na-enwu enwu.
Ememe ezumike na Fiji, ezumike na paradaịs
Be nwere mmasị n'ụsọ osimiri, coral na okike? Mgbe ahụ ịzụta tiketi na Fiji ma nwee ọmarịcha agwaetiti ndị a mara mma ma dị mma na Oceania.
Ihe ị ga-ahụ na Malta, ebe njedebe na Europe
Gaa n'ihu ma gaa Malta n'oge ọkọchị a. O nwere osimiri, ụlọ ihe mgbe ochie, akụkọ mgbe ochie na mgbe ochie. Won't ga-bnọ nkịtị gwụrụ maka a abụọ!
Lakechọpụta Ọdọ Titicaca
Ọdọ mmiri Titicaca nwere ihe na-atọ ndị na-atụgharị ya ụtọ. Ọ bụ ọdọ mmiri kacha agagharị na ụwa ...
Northern Ireland nwere ihe ịtụnanya sitere n'okike: Giants 'Causeway! Basalt kọlụm n'etiti ala na oké osimiri ...
The Cliffs of Moher, nleta pụrụ iche na Ireland
Echefula otu n'ime ebe kachasị mma na Ireland na otu n'ime ugwu kachasị mma n'ụwa: Ugwu nke Moher!
Lọ arụsị ndị dị ebube nke Ayutthaya
Thailand dị ebube ma ọ bụ ya mere ọ bụrụ na ịchọrọ ọdịbendị, echefula ileta mkpọmkpọ ebe nke Ayuttahaya, nke dị nso na Bangkok. Obí eze, ụlọ arụsị, ihe akpụrụ akpụ nke Buddha.
Osimiri kachasị mma n'ụwa iji gaa
Osimiri dị mma karịrị ebe ị ga-aga igwu mmiri. Ọ bụ oghere iji zuru ike na-ekpori ndụ ...
The catacombs nke Rome
Iche echiche banyere Rome iche echiche banyere oghere nke mmepeanya ọdịda anyanwụ, ugwu asaa ya, ọmarịcha ihe owuwu ya, ...
Mara Bran Castle
Ọ bụrụ na akụkọ akụkọ Count Dracula na-amasị gị, ị nwere ike ịga na Bran Castle na Romania ... na ọbụna nọrọ otu abalị Halloween agaghị echefu echefu!
Belchite, ebe na akụkọ ihe mere eme na Zaragoza
Ista na-abịa na Spain ị nwere ike ịga leta Belchite, obodo amị nke Agha Obodo. Bịa maka ngagharị n’etiti mkpọmkpọ ebe ya n’abalị!
Osimiri kacha mma na Asturias
Chọpụta osimiri kachasị mma na Asturias, ụsọ mmiri ndị dị na ụsọ oké osimiri Asturian mara mma, nke oghere ndị gbara ya gburugburu, ụfọdụ pụrụ iche n'ụwa.
Gaa na mkpọmkpọ ebe nke Herculaneum
Na-aga ?tali? Mkpọmkpọ ebe na-amasị gị? Ga-aga leta Pompeii? Mgbe ahụ ahapụla mkpọmkpọ ebe nke Herculaneum. Ha dị egwu ma dị nnọọ nso!